माइकल पी। एनी फेबर मनोचिकित्सक 'समस्या प्रतिक्रिया प्रक्रिया' अधिक प्रहरी राज्य र कम अधिकार: मार्टिन व्रिजल्याण्ड
मंत्री सान्डर डेकर (स्रोत dvhn.nl)
धेरै लेखहरूमा मैले वर्णन गरे किन अनी फेबरको मामला, जसमा माइकल पी। सतावट थियो, प्रायः पीएसओपी (मनोवैज्ञानिक अपरेशन) थियो। थप कानूनको माध्यम धक्का गर्न एक अपरेशन। आज कि बाँदर स्पष्ट देखि बाहिर आउँदैछ। अधिकतमको प्रमाण समस्या, प्रतिक्रिया, समाधान Optima Forma मा। तपाईंले ठूलो प्रभावको साथ एक सामाजिक समस्या सिर्जना गर्नुभयो (समस्या) मान्छे को बीच एक भयानक भावनात्मक प्रतिक्रिया को उत्तेजित गर्दछ (प्रतिक्रिया) र नयाँ कानुन र उपायहरू लागू गर्न सक्दछ जुन सामान्यतया कहिल्यै स्वीकार हुँदैन (समाधान)। त्यसपछि तपाईँले प्याकेजलाई "सरकारले सुरक्षामा असफल भएको छ कि समाजले यसको अपेक्षा गर्न सक्छ", यसैले मंत्री सिन्डर्ड डेकरको जस्तै; अभिनेता क्लब द हेग को सदस्य।
"हो, तर एनी फेबर साँच्चै अवस्थित भयो। हामीले उनको धेरै तस्विरहरू देखेका छौं र हामीले उनको आमाबाबुलाई चित्रमा देखेका छौं र त्यहाँ त्यहाँ रहेका फोटो र भिडियोहरूको रूपमा पर्याप्त प्रमाण छ। उनले यहाँ काम गरे र तिनले बहिनी र सामान गरे। हामीले उनको आमाबाबुलाई देखेका छौं, हामीले धेरै प्रमाण देख्यौं।"हुन सक्छ यो वास्तवमा अस्तित्वमा छ, तर यदि तपाईलाई थाहा छ भने कसले अफगानिस्तानको मालिक बनाउँछ, त्यसोभए तपाईं पछिको थाहा पाउनु कुन ठूलो पैसा हो र गहिरो नक्कली बनाउनको लागि कुन टेक्निकल साधनहरू उपलब्ध हुन सक्दछन्। यो बिना कुनै कारण छैन कि जन डे मोल (अफगानिस्तानको मालिक) एक टीवी निर्माता र अरबपति हो। आजकल तपाईं AI (कृत्रिम बुद्धिमानी) सफ्टवेयरसँग सजिलै संग अस्तित्व प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, फोटोहरु र भिडीयोहरू जुन उनीहरु जस्तो देखिन थालेका छन् र यसैले तस्वीरहरु र ध्वनि सामाग्री सहित इतिहास सहित सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जालहरू मिलाउँदछ। यो एक औसत पीसी मा तपाईं पहिले नै सम्भव छ; एक्लै छोडेर पेशेवरहरू गर्न सक्छन्। (भिडियो अन्तर्गत पढ्नुहोस्)
यो एकदम स्पष्ट थियो कि स्ट्राइटर प्रतिबंधित कानून एनी फेबर को मामला मा आकस्मिक थियो, कि भावनात्मक रूप देखि उत्तेजित मीडिया को ओवरडोज को मान्छे लाई प्राप्त गर्न को लागि लाया थियो प्रतिक्रिया चरण समझाएर। भावनाले सधैं राम्रो काम गर्दछ र यसैले तपाईं अभिनेताहरूलाई अभिभावक भूमिका खेल्नका लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यसैले भावनालाई प्रोत्साहन दिन सक्दछ। कसले भन्नेछ? उनीहरूलाई कसले चिन्न सक्छ? कुनै पनि, किनभने तिनीहरू वास्तविक जीवनमा अपरिचित हुन सक्दछ र सबै चीजहरू (मुख्यतः सोशल मिडिया राज्य) लाई सेनामा स्क्रोल गर्न सकिन्छ जसले यसो भन्छ "मलाई यो व्यक्ति थाहा छ, किनभने यो एक ज्ञान हो" वा "यो एक सहयोगी हो"। कसले मीडिया र सोशल मिडियालाई नियन्त्रण गर्छ, रंग र वास्तविकताको सम्पूर्ण धारणा बदल्न सक्छ। तल भिडियोमा एक नजर लिनुहोस् कि कसरी गहिरो नक्कली काम गर्दछ। त्यसैले तपाईं खरोंच देखि अनुहार बनाउन र उनलाई एक अभिनेता संग एक साक्षात्कार मा रहन सक्छन्, ताकि तपाईंको 'पिता' या 'आमा' पुरा तरिकाले नकली गर्न सक्छन्। यो मानिसहरूको समुहको लागि पनि सम्भव छ, किनकी तपाइँ त्यो माध्यम मा गर्नुहुन्छ ग्रीसस्क्रीन। अन्तमा, तपाईं सम्झौता अभिनेता वा इन्फिनिजिएलर मितीबेटरको ठूला समूहका साथ पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। माइकल पी। वास्तव मा अवस्थित छैन, एनी फेबर गहरी नकली सफ्टवेयर को द्वारा बनाई जान सकिन्छ र उनको आमाबाबु संग साक्षात्कार पनि सजिलै संग फेक सक्छ। (भिडियो अन्तर्गत पढ्नुहोस्)
"तर Vrijland, एनी फाबरको हत्याले पनि राम्रोसँग भयो होला?"हो, तपाईं केवल लेखको श्रृंखलामा गर्न सक्नुहुन्छ जुन मैले लेखेको थिएँ (हेर्नुहोस् यहाँ) यो स्पष्ट भएको छ कि यो धेरै सम्भावनाको कथा सकियो। कुन युवा महिला एक बाइकमा जान्छ र एक भविष्यवाणी गर्नको लागि साइकल चलाउछ र त्यसपछि ANWB मार्गमा साइकल चलाउन सुरु हुन्छ र किन यो एक्सएनएक्सएक्स अक्टोबरमा कोट फेला पर्यो र यसले डीएनए म्याचको लागि माइकल पनहुजसँग कस्तो अनुभव गर्यो? त्यो बस सही छैन। एनएफआई यो गर्न सक्छ6घण्टामा गर्न। किन माइकलले सबै भेटिएका वस्तुहरू वरिपरि फैल्यो र उनीहरूको के हो? स्कूटर सवारी पछि एनी फेबर संग? किन त्यो पहिले दफन गरियो र त्यसो गरेपछि फेरि र फेरि गाडिने? किन फोर्ससेनिक र ओटोप्सी रिपोर्ट देखाइएको छैन अदालतको मामलामा? ओह राम्रो छ, र यस मामला मा धेरै अधिक विषमताहरु छन्, तर मुख्यतः किनकि तपाईंले भावनात्मक आमाबाबु को छवियों देख्नुभएको छ, तपाईमा विश्वास गर्न आएको छ। रोमाञ्चक कहानी र खजाना शिकार (समस्या) भावनात्मक रूपमा मानिसहरु लाई धेरै प्रभावित गरे र यसैले यो मा भयो प्रतिक्रिया को लागि "मंत्री" (अभिनेता) संंदर डेकर (नयाँ कानून) को गल्ती गर्न को लागी (समाधान)। यो तपाईंको बच्चा वा अहिले द्वारा गर्न सकिन्छ आफैलाई पनि हुन्छ:
डेकरले यसलाई 'धेरै अचम्मलाग्दो' भनिन्छ जुन टिबीबीएसमा उपचार चाहिन्छ जुन अनुसन्धानको साथ सहयोग नगर्न सक्दछ र यो अब बढ्न सक्दैन।
यसको अतिरिक्त, एक संरचित जोखिम मूल्यांकन र एक अपराध विश्लेषण अनिवार्य बनाइन्छ। स्वतन्त्रतालाई स्वतन्त्रता दिंदा वैज्ञानिक जोखिमहरू अझ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।
छोटो: मनोवैज्ञानिक राज्यमा अनुसन्धान अनि अनिवार्य हुन्छ र हामी माइकल पनहुजको विचार गर्छौं र त्यसैले हामी आवश्यकताबाट पक्का छौं। तथ्य यह है कि धेरै नागरिकहरु को मतलब यह हो सकता है कि वे अनिवार्य परीक्षा से गुजरने के बाद, जीवन के लिए राज्य को निपटारे में रखे जाएंगे और (इस प्रकार सभी मानव अधिकारों को खो देते हैं) का मतलब है कि जो कोई भी राज्य को मनोचिकित्सक को खतरे करना चाहता है लाई उल्लेख गर्न सकिन्छ। त्यसो त धेरै पुलिस राज्य।
ट्याग: एनी, डिकर, Faber, विशेष, उपायहरू, माइकल, minister, P., प्यान घर, Sander, tbs, कानून
28 मार्च 2019 मा 12: 29
रिजर्वहरू प्रत्येक स्तरमा कडा कडा हुन्छन् कि आलेख 13 ले राजनीतिब्रोको अनुमोदन गरेको छ। प्रश्न कति लामो छ, उदाहरणका लागि, हामी एएनएसपी उपेक्षा देख्न को लागी एक साइटमा प्रतिक्रिया गर्न सक्छौं। ब्लिंकरहरू संग लाशको लागि केही परिवर्तनहरू।
28 मार्च 2019 मा 13: 50
पुलिस अवस्था निरन्तर तर प्रभावी रूपमा प्रगति गर्दैछ।
28 मार्च 2019 मा 12: 31
तिनीहरू सजिलो छन्।
28 मार्च 2019 मा 13: 11
नेदरल्याण्ड्स जलभूमिले पहिलो नजरमा यो अनुकूल, शान्त र डरलाग्दो देखिन्छ ..तर त्यहाँ एक ह्रास अचम्म छ
28 मार्च 2019 मा 14: 02
ओह ठीक छ, दासहरू परवाह गर्दैनन्। यहां सम्म कि गैर-सँगी सँगी मानव मस्तिष्कमा असर पर्दछ। केही पनि नभएसम्म सरकारको निर्देशित नभएसम्म। यो तथ्य यो सबै उपायहरु लाई धक्का दिइन्छ किनभने मदुरोमम मा कुनै विरोध छैन। हो अभिनेताहरू। यो कदम दासहरू जगाईन, यसको विपरीत, तिनीहरूले सरकार (stockholm सिंड्रोम) सँग आफैलाई पहिचान गर्नेछ। त्यहाँ साधारण नागरिकहरूको बीचमा सशक्त हुनेछ, तर बाक्लो नगर्ने बागहरू सधैं स्वच्छ देखिन्छ। अति सजिलो अधिकार?
28 मार्च 2019 मा 15: 37
वर्षा पछि सूर्यशाइन आउँछ, सप्ताहांत (अस्थायी भाग्य पढ्ने) सावधानीपूर्वक योजना बनाईएको छ ...
28 मार्च 2019 मा 20: 30
म मार्टिन व्रिजल्याण्ड वेबसाइट बाट खुसी छु, किनकि म अझै पनि सामान्यतया महसुस गर्दछु। विफलता देखि तुरुन्तै मैले तुरुन्तै फोटो खिच्न सकेन। एउटा खोजी गर्नुभयो: यस्तो जवान महिलाको एफबीमा कुनै प्रोफाइल छैन? तर जब मैले कथामा शंका गरे, मैले आफैंको बारेमा लगभग मूर्ख महसूस गरे: के भयो भने यो वास्तविक थियो?
यसैले यो एउटा राहत हो जुन मैले यो साइट पाए। यो अब एक नाम छ: मनोचिकित्सक। तपाईंलाई थाहा छ किन यो राम्रोसँग काम गर्दछ? जो कोहीले अनौठो प्रतिक्रिया देखाउँछन् उसको दाहिने तिर सही देखिन्छ। यसैले यो दृष्टिकोण: सधैँ अपमानजनक छान्नु, ताकि मानिसहरूले स्वचालित रूपमा नयाँ कानून स्वीकार गर्नेछन्।
तर के हो यदि मनोविज्ञान यति राम्रो हुन्छ कि तपाई अब यसलाई एक मनोविज्ञापनको रुपमा चिन्न सक्नुहुन्न? मलाई त्यो डर लाग्छ। अनि किन केहि पत्रकारहरूले अनुसन्धान सञ्चालन गर्छन्? यस मामला संग, पर्याप्त ढीला समाप्त हुन्छ, मलाई लाग्थ्यो। अनि पत्रुस आरडीवीले यसबाट किन भाग लिन्छ? या यो स्ट्राइक गोपनीयता कानून को लागी हो? र किन केहि कम मान्छे यसको बारेमा प्रश्न सोध्छन्?
28 मार्च 2019 मा 22: 09
28 मार्च 2019 मा 22: 35
तपाईं किन सोच्नुहुन्छ त केहि पत्रकारहरु अनुसन्धान गर्छन्? तपाइँ तिनीहरूलाई कसरी प्रशिक्षण दिनुहुन्छ र तपाइँको डिग्री प्राप्त गर्नुहुन्छ? तपाईं "रोजगार द्वारा" रोजगार को लागी काम कसरी प्राप्त गर्नुहुन्छ? के तपाइँले आफ्नो विरासतमा पीटर आर डी वेस्सेसको अध्ययन गर्नुभएको छ? तपाई किन सोच्नुहुन्छ कि उहाँ त्यस्ता विषयहरूमा अगाडि मानिस हुनुहुन्छ? के तपाईंले कहिल्यै 'पैसा' को अवधारणाबाट सुन्नुभएको छ? खरानीको लागि कसले चाँदी चाँदीको टुक्रा पनि पार्यो?
28 मार्च 2019 मा 22: 45
@juul, मलाई थाहा छैन कि तपाईं कति उमेर वा जवान हुनुहुन्छ? तर तपाईंको भोलिपल्ट टपप्प बन्द छ, के तपाईंले कहिल्यै सोचेको छ कि 'केहि' पत्रकारहरू 'मीडियाको बावजूद वास्तवमा पत्रकारहरू हुन् र नियन्त्रणकारी शक्तिको विस्तार हुँदैन? के तपाईं सही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू सोध्नुहुन्छ भने के तपाइँ ध्यान दिनुहुन्छ? तपाईले अर्को प्रश्नको साथ प्रत्येक प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ ...
तपाईं कुन हदसम्म गहराईमा जान चाहानुहुन्छ र सबै कुरा निको पार्न चाहानुहुन्छ?
28 मार्च 2019 मा 23: 01
वा हामी यहाँ राम्रो तरिकाले प्रशिक्षित पत्रकार स्कूल टोलको राम्रो उदाहरण देख्न सक्छौं?
पहिला एक प्रशंसा दिनुहोस् र त्यसपछि एक निश्चित दिशामा पाठकको धारणा चलाउनुहुन्छ।
यदि तपाइँ यो सुनामीमा साढे वर्षको लागि एक वेबसाइटलाई निरन्तरता दिन खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ यसलाई पहिचान गर्न सुरु गर्नुहुनेछ
29 मार्च 2019 मा 00: 05
मैले पहिले नै यस साइटमा केहि पपअप देखेको छु, कम्तीमा वेबकेयर सम्पादकहरू जो दासको खर्चमा डिफिनो प्रोग्रामको पालना गर्छन् वा भर्खरै भर्ती हुरिस्टर्स गर्न प्रशिक्षित गरिन्छ किनभने बिल भुक्तानी गर्नु पर्छ। हुन। जब फर्वार्ड गर्न सोध्नु भयो, के मान्छेले कति टाढाको जवाफ दिन्छन्? किनभने बेफ्लेट आईटी इम्मर ई बफहल ...।
29 मार्च 2019 मा 09: 48
अख्तियारमा ती दासहरू छैन जसले बेभेल। ट्राल र एमएसएम मिडिया आदिलाई लेख्दछ।
मार्टिन राखेर तपाईंको चीज गरिरहनुहोस् र यो भन्नुको रूपमा यो !!!
29 मार्च 2019 मा 09: 46
तिनीहरू ट्रलहरू कोसिस गरिरहेका छन्। यो एक प्रशंसाको रूपमा हेर्नुहोस् कि उनीहरूले प्रयास गर्छन्।
29 मार्च 2019 मा 10: 29
बच्चा र किशोरावस्थाको रूपमा म धेरै मायालु प्रविधिको प्रयोग गर्थें!
यसले मलाई यो वर्ष कसरी सताएको छ कि यो समाज कसरी सताएको छ र त्यो मनोविज्ञान, narcissist र शक्ति ताली बिजुली पदहरूमा छन्, जबकि मान्छे भ्रम दिइन्छ कि बुद्धिमानी र बुद्धिमान मानिसहरूले यी पदहरु पढाई पछि यी पदहरू प्राप्त गर्नेछन्। अनि निस्सन्देह मात्र इमानदार र बुद्धिमानी व्यक्ति न्यायाधीश, महापक्ष वा सेवकहरू हुन्छन्। नाका मानिसहरूले यो विश्वास गर्छन्।
बच्चाको रूपमा, म आफैंलाई ठूलो देखाउन अरूलाई बेवास्ता गर्न व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, जसको साथमा शक्ति र आत्माहरू दिन र रात व्यस्त छन्। न त म मस्तिष्क लालची वा अरूको खर्चमा अरुलाई समझाउन आग्रह गर्दछु। लालच भनेको औसत पश्चिमी व्यक्तिले भोग्नु पर्ने आन्तरिक खालीपनको परिणाम हो। यस खालीपनको कारणले गर्दा यो अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ, किनकि तपाईलाई व्यावहारिक रूपमा सबै निष्पक्षबाट छुटकारा पाउनु पर्दछ र प्रचारले जीवनको सम्बद्ध बाटोको साथ हालको संस्कृति र समय आत्माको परिणामस्वरूप निषेध गरेको जस्तो निगलिएको छ। अहंकारले यस प्रक्रियालाई भइरहेको छ र वातावरणले तपाईंलाई रेखामा राख्नेछ।
एक राम्रो मौका छ कि जूल अपेक्षाकृत युवा हो, यद्यपि 50 वर्ष को उमेर मा मेरो आमाले कसरी प्रणाली सताएको देख्न थाल्नुभयो, किनकि दुष्ट पागलले सेवा बनाउछन। त्यसअघि उनको आफ्नै टापुमा बाँचे र उनको ईमानदारीको कारण उनी कल्पना गर्न सकेनन् कि धेरै बेइमानी र पनि मतलब भनेको मानिसहरू वरपर हिडिरहेका थिए। किनकी उनी आफ्नो आफ्नै टापुबाट छुट्टिन् र अन्य द्वीपहरू हेर्न पाउँथे, तिनले बिस्तारै पत्ता लगाए कि अधिकांश मानिसहरू एक दोहोरो एजेन्डा छ र मास्क सँगै हिंड्छन्।
एक जवान वयस्कको रूपमा, भावनाहीन हुनुको जस्तो खराब नराम्रो लाग्दैन, तर एक राम्रो! नम्र रहनुहोस्, किनकि यो जानकारी प्राप्त गर्न को लागी यो सजिलो छ कि मेरो उमेर पछि मात्र उमेर मा मात्र उपलब्ध छ। तर एक पटक तपाईंले कसरी सोच्नु भयो समाज कसरी काम गर्दछ, तपाईं के गर्नुहुन्छ? अधिकांश मानिसहरू केही गर्दैनन्, किनभने उनी यो बच्चा भएदेखि यो सिकाइएको थिएनन्। तिनीहरू निष्क्रिय भेडाको रूपमा आज्ञा पालन गर्न सिकाइएका छन्। यसबाहेक, उनीहरूले अब चाँडै काम गर्दछन् भने परिणामहरू के हुन सक्छन्। सामूहिक जागरण प्रक्रियाको यस चरणमा, वास्तविक योद्धाहरू सबैभन्दा अगाडि छन्।
पावर ताल र सेतो कलर अपराधीहरू सावधान छन्। तिनीहरू मात्र दुर्व्यवहार गर्न सक्छन् किनकि तिनीहरू प्रणालीमा अन्य सेतो किनाराहरू द्वारा समर्थित छन्। यदि तपाईं तिनीहरूलाई सामना गर्न भेट्नुहुन्छ भने, अरू कोही त्यहाँ त्यहाँ (र मैले धेरै पटक अनुभव गरेको छु), त्यसो भए तपाईं कस्तो कमजोरीहरू हौ। भित्र भित्र तिनीहरू खाली र बिरामी छन्, जो धेरै चिन्तित र असुरक्षित छन्। केवल सामूहिकले तिनीहरूलाई बलियो महसुस दिन्छ।
3 अप्रिल 2019 मा 10: 54
तिनीहरू फेरि पूर्णतया खुसी हुन्छन्!
3 अप्रिल 2019 मा 10: 59
3 अप्रिल 2019 मा 11: 10
एकदम ठिक छ BREAKING
Echt वा Toneel Attje Kuiken अस्वस्थ हुन्छ
एन्जिङ (पीएनडीएडीको लागि कोठामा 12 वर्ष) वास्तवमा उनको दिमाग गुमाउनु भएको थियो जब त्यो 2e कोठा मा डेस्क पछि Psy-Op Faber कुरा गर्दै थिए।
यदि उनको लिपि पढ्दा उनको सहज भएन, उसले सकेन, तर उनीसँग अझै केहि अनुभव छ। त्यसपछि चाँडै राम्रो हुनुहोस् ;-), पानीको गिलासले चमत्कार गर्यो
वा, अन्य सम्भावना:
के उनले वास्तवमा यस अवस्थामा अध्ययन गरेको हुन सक्छ? अनि उनले यो वेबसाइटलाई मौकाले पढ्ने गर्थे, जुन 95% को लागि थाहा पाउँछ कि सम्पूर्ण मुद्दा विशुद्ध PsyOp हो। झूटो र अभिनय उनको लागि धेरै भयो
उनले आफ्नो अन्तस्करण र उनको आत्माबाट पकड्यो र यसैले तिनी अस्वस्थ भए ???
टेलिभिजनको अनुसार भावनाहरू पहिले नै बढ्दै जान्छ (हामी ईम-बिल्डिंगलाई फोन गर्छौं) र पछि एटजे लगभग पागल हुन्छ।
« थियरी Baudet फेरि नेदरल्यान्ड्स ठूलो हुनेछ! वास्तवमा!
ब्रेक्सिट र युरोपको लागि योजना बनाई अराजकता »
कुल भ्रमण: 10.834.512